Ungawasusa njani amabala etumato | IBezzia
UTony Torres | 10/06/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 10/06/2021 11:01 | Ikhaya
Ukususa amabala etamatato kunokuba nzima kakhulu, ngakumbi ukuba ibala lisemalaphu athambileyo okanye ukuba livunyelwe ukuba lome kakhulu. Ukwenza ngokukhawuleza kubalulekile ukuze kupheliswe amabala etumato ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, nokuba awuligcini ibala okwangoku kwaye kudlule iiyure ezininzi, ngamanye amaqhinga kunokwenzeka ukuba uziphelise ngokupheleleyo.
Kukwabalulekile ukuqaphela ukuba luhlobo luni lwetamatato oluvelise ibala, kuba kaloku i-tomato yendalo ayifani ne-tomato sauce. Isosi esekwe kwitamatato enje nge ketchup, ukongeza kumxube wetumato, iqulethe ioyile, izinongo kunye ne liqueurs Ke amanyathelo ekufuneka elandelwe aya kwahluka kwimeko nganye. Ukulandela uza kufumana ezinye iingcebiso zokususa amabala etumato.
1 Susa amabala etamatato endalo
2 Amaqhinga okususa amabala etumato atsiweyo
3 Ezinye iingcebiso
Susa amabala etamatato endalo
Itumato yendalo kulula ukuyisusa, kuba ayinazo naziphi na ezinye izithako okanye izongezo ezenza nzima ukuba ibala. Nangona kunjalo, inkqubo yahlukile ukuba uzama ukususa ibala leetumato elitsha, kunokuba ibala esele lomile. Kwimeko yokuqala kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Kuqala susa okunye ukutya ngecepheUkuba isambatho siethe-ethe, musa ukusebenzisa amandla ukuze ungonakalisi iintsinga.
Beka ingubo phantsi komjelo wamanzi abandayo, uyiyeke ibaleke ukusuka ngaphakathi kwengubo ukuya ngaphandle.
Faka isicelo inani elincinci lesicoci wokuhlamba isitya kwaye uhlikihle ngeminwe yakho.
Yipule ngamanzi abandayo de kube kususwe igwebu lesepha.
Qhubelela kwi Hlamba impahla ngesiqhelo.
Ukuba ibala leetumato lendalo lomile, Kuya kufuneka ulandele la manyathelo ukuze ulahle ngokupheleleyo.
Nciphisa a ilaphu lomqhaphu kunye neviniga emhlophe ukucoca.
Ngenyameko, Faka isicelo kwibala leetamatato de lipheliswe ngokupheleleyo.
Yiya kwiindawo ezahlukeneyo zelaphuOku kuya kuthintela iitumato ekubeni zigqithisele kwamanye amalungu engubo.
Yipule ngamanzi abandayo kwaye uhlambe kumatshini wokuhlamba njengesiqhelo.
Amaqhinga okususa amabala etumato atsiweyo
Iisosi zetumato ezipakishwe ziphethe izinto ezingaphezu kwesinye, ezenza ukuba kube nzima ngakumbi ukuphelisa okungafunekiyo. amabala empahla. Ngokukhawuleza ukwenza, kuya kufuneka ukuba ususe ngokupheleleyo i-tomato bala. Ke ukuba ufumanisa ichaphaza leetumato elithosiweyo kwiingubo zakho ungayishiyi engobozini yokuhlamba impahla ilinde ukuhlanjwa. Landela la manyathelo kwaye ungasusa ibala leetumato kwimpahla yakho.
Kumamkeli xuba isoda yokubhaka kunye namanzi amancinci. Kufuneka ufumane unobumba lwe-grainy ukucoca ibala.
Ukusasaza i-baking soda unamathisele kwibala kwaye ushiye malunga nemizuzu eli-15.
Ixesha lihambile, susa umxube uze uhlambe ngamanzi abandayo.
Phinda la manyathelo de ibala letumato limke ngokupheleleyo.
Ekugqibeleni, Hlamba impahla njengesiqhelo kumatshini wokuhlamba.
Ukwenza ngokukhawuleza kubalulekile, kodwa ubeka emngciphekweni wokuthatha izigqibo ezingalunganga kwaye uqhubeke nokwenza imeko ibe nzima. Esinye seziqalo zokuqala xa sifumana amabala etumato kukusebenzisa i-napkin ukususa iintsalela, into ngokungathandabuzekiyo eyimpazamo. I-napkin iyaqhubeka isasaza ibala kwaye iyanceda ukuba ifakwe kakuhle yimicu yelaphu.
Kukhethwa kula matyala ukusebenzisa icephe okanye imela ukususa ukutya okuseleyo, ngaphandle kwengozi yokusasaza ibala. Kuya kufuneka ungasebenzisi isomisi xa uhlamba iimpahla zakho ezinamabala etumato, kuba ubushushu bunceda ibala ukuba lilungise kakuhle kwimicu yelaphu. Xa uhlamba impahla, vumela ukuba yome emthunzini ukuthintela ubushushu ekumiseleni ibala kwaye kube nzima nokususa.
Okokugqibela, ukuba unobumba lwetumato kwiingubo zakho kwaye akukho nanye kula maqhinga anokusebenzela, ungalahl 'ithemba. Ngaphambi kokuzama ezinye iindlela, Nokuba imveliso yokususa ibala kwintengiso, linda ukuphelisa isisombululo sangaphambili. Oko kukuthi, hlamba ingubo kwaye uyiyeke yome ngokupheleleyo. Emva koko unokuzama elinye iqhinga ngaphandle kwengozi yokonakalisa iimpahla zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ungasusa njani amabala etumato
Iinoveli ezi-6 zolwaphulo-mthetho eziza kukutsala